Amanqaku kaDana Roth Martech Zone |
Amanqaku ngu UDana Roth
UDana ngumphathi weNtengiso yeMveliso ye-FORTVISION. Uxanduva lwakhe lubandakanya ukuphuhlisa iindlela zokuthengisa kunye nokugcina zonke izixhobo zedijithali zeqonga kunye nokwakha ubudlelwane kunye nefuthe.
NgoLwesibini, Julayi 16, 2019 NgoLwesibini, Julayi 16, 2019 UDana Roth
Akukho nto idanisayo njengompumelelo wentengiso ohlawulelweyo oqhube iitoni zezithuthi kwindawo yakho kodwa zakhokelela kuguquko olusezantsi. Ngelishwa, abathengisi abaninzi bedijithali banamava oku, kwaye isisombululo sinye: yenza indawo yakho ibe nomxholo oguqula kakhulu. Ekugqibeleni, elona candelo linzima kukungamngenisi umntu emnyango, kukungenisa ngaphakathi kuye. Emva kokusebenza namakhulu eziza, siye safumana ezi ngcebiso zilandelayo